APPLE "BUUXINTA CAD": SIFOOYINKA KALA DUWAN, SHURUUCDA BEERASHADA IYO DARYEELKA - GEED GEEDEEDKA
Ugu Weyn Ee Geed geedeedka
Agrotehnika beerashada ee tufaax "buuxinta cad"
Midhaha "Filling White" marka hore waxay ka soo baxaan dhammaan noocyada tufaaxa. Waxay leeyihiin dhadhan wacan waxayna u fiican yihiin macaanka, macaanka iyo cuntada kale ee cuntada qasacadaysan. Noocyada noocan oo kale ah ayaa laga helaa ku dhowaad qoys kasta, way fududahay in la joogteeyo oo aan abuurin dhibaato aan loo baahnayn. Haddii aan bixinno geedaha yaryar ee "Apple White" oo leh quudin iyo quudin waqti gaaban, geedku wuxuu u mahadcelinayaa fruiting frauiting sannadka saddexaad ka dib markii la beero. Sida loo sameeyo tan, akhri.
Ma taqaanaa? Kala duwanaanta "buuxinta Caddaan" maaha mid ka mid ah caleemaha gaarka ah, sababtoo ah waxaa lagu xayeysiisaa caawinta xulashada caanka ah. Wuxuu ku dooday in dhulkiisa uu yahay wadamada Baltiga.
Astaamaha geed geedka "Filling White"
Tani waa noocyo aad u badan oo ah koriinka xagaaga hore.
Geedka waxaa lagu gartaa sharrax aad u qurux badan ama taajka miisaanka yar yar iyo caabbinta dhaxan dhexdhexaad ah.
Kala duwanaanshaha waxaa lagu gartaa dulqaad dhexdhexaad ah si ay u kabaan caleemaha iyo miraha, cudurrada kale iyo cayayaanka. Geedo yar yar oo geedo tufaax ah "Filling White" waxay bilaabaan daweyn inta badan, sannad walba waxay keenaan dalag badan.
Faa'iidada caleenta, bannaanka u badan tixgelinayaan ubax hore iyo adkaysiga budada ah dhaxan guga ama cimilada qabow, iyo sidoo kale awood u leh inuu galo marxaladda fruiting ee sanad 3-4aad. Waxay sidoo kale xusuusnaadaan tayada dhadhanka ah ee tufaaxa, wax soo saar badan, mararka qaar gaaraya 200 kg oo geed ka mid ah. Khasaaruhu waa boodhka siman ee dhammaan tufaaxa, gaadiidka liita.
Beerta Qaar ka mid ah waxay aqoonsadeen geedka tufaaxa "Beer Filling" oo leh sharaxaad ka duwan noocyada kala duwan ee "Papirovka", taas oo ka mid ah dhirbaaxada gaar ah ee jilayaasha. Tani waa nooc gebi ahaanba duwan oo geedo tufaax ah. Waxay leeyihiin caleemo qulqulaya oo aad u culus oo midabka midab-madow ah. Caanaha daaqsinka ah waxay kuxiran yihiin qaab qaabeysan, midab yar, midab leh.
Kala baxaan caleenta, mararka qaar ukunta, dhexdhexaad ah, aan hoos u dhicin, hooska cagaaran-cagaaran oo leh dhar xoog leh gudaha gudaha. Maadada waa weyn oo aan gaaban. Ubax cad cad iyo casaan. Miraha waa cagaar iftiin leh caraf udgoon leh, hindis cad oo caano ah. Laakiin wali waa isbeddel. Geedka tufaaxa "buuxinta cad", taas oo ka duwan "Papirovka", wuxuu bilaabmaa inuu u bislaado muddada dhexe laga bilaabo July. Tufaaxyadeeda waa dhadhanka dhadhanka, maaha mid casri ah oo kala duwan. Bisitaanka "Paping" waxay u muuqataa 2-3 todobaad kaddib "White buuxinta."
Marka ay tufaaxa dharka, jidhkoodu wuxuu noqdaa mid madow, isago. Maqaarku waa khafiif, oo aan lahayn jaakad sare. Markaad ku dhufatid midhaha madow ee muuqata. Sidaa darteed waxay u muuqdaan kuwo aan ku habooneyn kaydinta. Waxay ku wada baabba'een cayriin ama loo diraa shaqaynta.
Ma taqaanaa? Mid ka mid ah tufaaxa "buuxinta cad" ayaa culeyskiisu yahay 65 g oo ah nuqullada dhalinyarada ah, miraha way yar yihiin, waxayna miisaankoodu yahay 115-150 g.
Abuuritaanka geedo tufaaxa "Filling White"
Doorashada saxda ah ee geedo waa fure u ah beerista guul leh ee geedka tufaaxa. Horumarka geedka inta lagu jiro tobanka sano ee ugu horeeya waxay ku xiran tahay sida ay u xoogan tahay iyo caafimaadkaba. Laakiin haddii aad ku darto talo qaar ka mid ah beerashada iyo daryeesha dalagga si ay u hesho wax-soo-saarka tayo-sare leh ee "Aaladda Bini'aadan" geedo tufaax ah ee kala duwan, fruiting degdeg ah oo badan ayaa la damaanad qaaday. Waan fahmi doonaa faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan gogosha geedaha tufaaxa "Filling White."
Sida loo doorto geedo
Xulashada geedo way ka fiican tahay in laga sameeyo xarumaha xanaanada iyo xarumaha beerta. Halkaas waxaad arki kartaa tayada geedka iyo sidoo kale la tasho khabiiro.
Marka lagaa dhigi doono tusaalooyinka ku qoran, iyo xididdadiisa waxaa lagu daaweyn doonaa qof gaar ah oo loogu talagalay gaadiidka guuleysta.
Markaad dooranayso fiiro gaar ah si xididada. Waa inay yeeshaan muuqaal caafimaad oo xooggan, laamood oo si fiican u horumarsan, oo aan lahayn farsamooyin farsamo ah iyo jarista, iyo sidoo kale iyada oo aan qallajineynin iyo dhumucdaba. U fiirso wixii waxyeello ah ee ku yimaadda, meelaha ciyaalka ah. Ku xoqin lafdhabarkaaga farahaaga - qoryaha cad oo cusub oo muuqda goobta boogta ayaa muujinaysa sida ay wax u noqon karto dhalidda.
Haddii kale, dhibco madow waxay leeyihiin oo ku saabsan qallaylka nidaamka xididka. Qalabkani ma aha mid u qalma. Ku haboon tahay in la beero geed tufaax ah, badanaa oo leh dherer aan ka yarayn 1.5 m, oo leh qoorto xidid caafimaad leh, garab toosan ah iyo shan laan oo qalfoof ah. Xaaladaha ku haboon looma dhigi karo jilicsan iyo dhaawacyo kale oo dabiici ah.
Waa muhiim! Iska ilaali geedo aad u ballaaran. Waa marka ugu horaysa ee ay u muuqato in ay si dhakhso ah u koraan. Xaqiiqdii, dhirtaasi waxay si hoose ufaansan yihiin waxayna badanaa xanuunsadaan.
Marka la beero qodab ayaa la doortaa, su'aashu waxay ka dhacdaa diyaarinta gaadiidka. Si arrintan loo sameeyo, ku xidho xididdada dharka qoyan iyo si taxadar leh u dhig meel bac ah. Ujeedadaas waxaa suurtagal ah in la diyaariyo substrate aad u qoyan. Laamuhu waa yar yihiin. Xaaladaha aad qorsheyneyso inaad ku beerto dhowr maalmood ama toddobaadyo si aan nidaamka xididka u dhicin, geedku waa inuu noqdo prikopat ama ka tago seedling bacda leh carrada qoyan.
Xilliyada xilliga soo degidda iyo xulashada goobta
Xilliga guga waxay damaanad qaadeysaa sabiibta yar yar ee samaynta rhizomes awood leh iyo horumarinta labbo caafimaad leh, laan adag. Geedka tufaaxa noocan oo kale ah wuxuu yeelan doonaa waqti uu kula qabsado jiilaalka oo u badbaado si badbaado leh.
Diidmada waa inay ahaataa mudada laga soo bilaabo dhammaadka Abriil ilaa horraantii Maajo. Waxa ugu muhiimsan waa in dhulka uu ka guuro jiilaalka, qalalan ku filan oo si wacan u diirran. Nidaamka asaasiga ah ee geedo ka hor beerto waa in laga tago 24 saacadood biyaha. Iyo inta lagu jiro beeritaanka biyaha, halka dhulka ay nuugi doonaan qoyaan.
Beeraha xilliga guga waxaa si gaar ah loogu talinayaa dhirta dhallinyarada da'doodu aanay gaarin laba sano. Baadhitaano badan oo baaluq ah oo bilaw ah xilliga dayrta bilowga Oktoobar.
Dhirta Apple ma xididaan meel walba, sidaas darteed doorashada ah ee goob lagu beero ayaa door weyn ka ciyaaraya. Waa in maskaxda lagu hayaa in "Buuxinta White" aysan jeclayn hooska, qorraxda koonfureed, dabayl xoog leh iyo qoraallo. Geedka ayaa si liidata u kobcin kara. In beerta, masaafada u dhexeysa dhirta waa inay ahaataa 1.5-2 m. Goobta dhulka 2 meter.
Dalagyo miro leh oo miro leh ayaa ku kordhay maadooyin waxtar leh oo aan ka buuxin ciidda madow. Ha ku beerin meelaha qoyan ama meelo dhagax ah - geedku wuu xanuunsanayaa oo wuu dhaawacmayaa. Sidoo kale iska ilaali heerarka sare, sida geedku jecel yahay qoyaan dhexdhexaad ah.
Ma taqaanaa? Casiirka tufaaxa "buuxinta cad" ayaa leh xaddiga kalluunka, taasoo saameyn ku leh jidhka bini'aadamka.
Nidaamka wareegsan ee wareegsan
Afar toddobaad ka hor inta aan laga beerto geedo tufaaxa ah waxay bilaabaan shaqo diyaarin ah. Waxaa loo qabtaa si loo fududeeyo geedi socodka aasaasiga, abuurista dhulka microflora loo baahan yahay.
Si loo dhammeeyo, qodo dalool leh dhexroor ah 1 m iyo 70 cm qoto dheer. Waxay muhiim u tahay habka diyaarinta lakabka sare ee ciidda bacrin ah si ay u jiifiso hal jihe, iyo hoos - hoos u dhaco - mid kale. Ha ka tegin taladan, sababtoo ah mustaqbalka dhulka waxaa la samayn doonaa dhulka oo ka soo duulaya koowaad. Dhexdheerta jeexjeexan, ku wado qoryaha yaryar, u xir mandheerta hoose si aad uga hortagto infakshanka qanjirada. Qeybta hoose ee ceelka waxay dhigeen lebiska ama lebiska jabay.
Ka dibna isku dar qolfahaaga, peat iyo humus lakabka bacriminta ee carrada (laga bilaabo tuulada ugu horeysa) oo buuxi qulqulka leh substrate. Qaar ka mid ah khabiirada ayaa ku talinaya inay arrintan u sameeyaan si aad u sarreeya, sharraxan in mustaqbalka marka ciidda ay hoos u dhigto geedka tufaaxa uusan ku jiri doonin funaanadda. Shaqadan ka dib, ceelku wuxuu ku daboolaa filim waxana uu baxayaa muddo bil ah.
Waqtigaas ka dib, waxaad qorsheyn kartaa inaad degto. Nidaamkan waxaa loo qaybin karaa dhowr tallaabo:
Marka hore kormeer wax-soo-saarka. Muuqaalka geesaha caleenta ah ee ku yaalla cinjirka talooyinka asaasiga ah waa calaamad digniin ah. Waxay u baahan yihiin in laga saaro ka hor inta alwaax ku nool. U hubso inaad hubiso wixii xanuunka lugta ah. Haddii rhizomes aan lagu dhegulayn wadahadal dhooban, hadda ka dib si aad uga fogaato qalajinta.
Geedo leh xididada caafimaadka leh iyo kuwa la warshadeeyey ayaa lagu yareyn karaa barafka diyaarsan. Xaaladdan oo kale, peg waa in la dhigo dhinaca koonfureed ee jirridda, si looga hortago gubashada guga ee jilif.
Si taxaddar leh u samee xididdada iyo biyaha geedka tufaaxa ilaa ciidda ay biyaha ka soo nuugto.
Ka dibna ciidda carrada leh ciidda bacrin ah oo si fiican u tamp. Isla mar ahaantaana, si fiican u ruxi jirida si ay hannaanku u sameystaan ​​inta u dhaxeysa xididada oo la qarxin doono dhulka, geedkuna ma engegi doono. Iska hubi in meesha loo maro jirridda jirridda ee xididka (qoorta xididka) uu ku yaallo qiyaastii 5cm oo dhulka ka sarreysa.Haddii aad ku aaso, geedka tufaaxu wuxuu yeelan doonaa miro xun, haddii uu si xoog leh u sarreyso, way engegtay. Meel ku dhaji khariidadan oo leh meel yar oo ciid ah. Trick Tani waxay u oggolaan doontaa biyaha in ay soo baxaan marka la waraabiyo.
Ku dheji foostada godka. Tani waxay u oggolaaneysaa jirridda in ay ku horumariso jihada saxda ah waxayna ilaalineysaa xididdada xoogga leh ee dabacsanaanta dabaysha.
Ugu dambeyntii, qulqulaya wareegga si looga fogaado qoyaanka uumi baxda. Si looga fogaado wasakheynta xididdada leh jeermiska ka soo baxa walxaha qarxa, ka soo noqo 15 cm mitir.
Waa muhiim! Codsiyada isku-dhafka ah ayaa ka hortagaya sida mulch for geedo tufaax ah. Waxay gacan ka geystaan ​​oxidation of ciidda.
Talooyin ku saabsan daryeelidda tufaax "buuxinta cad"
Dhirta Apple "Buuxinta cad" ee xannaanada ma kala duwanaan noocyo kale. Dhirta geedaha iyo geedaha qulqulaya ma abuuraan dhibaatooyin waxayna ku farxaan milkiilayaashooda awoodda ay u leeyihiin in ay la qabsadaan xaaladaha cimilada.
Waa suurtogal in la saameeyo tirada iyo tayada miraha iyadoo la qaadanayo rinji-rooriyaal sax ah. Noocyada kala duwan lafteeda ma awoodo in ay u rido.
Haddii aysan jirin geedo kale oo tufaax ah oo soo socda, miraha yar ayaa la xirxirayaa, cabirkooduna way niyad jabayaan. Khubarada ayaa sheegaya in xaafad wanaagsan ay kordhineyso dhalidda, xittaa geedo iskiis ah. Bannaanka beeraha ee kaqeybgalayaashu waxay la wadaagaan waayo-aragnimadooda "White Pouring" nooca roodhida tufaaxa runtii maaha mid dhab ah. Waxa ugu muhiimsan ee dhirta ahaayeen horay bislaada (noocyada xagaaga). Laakiin botanist, iyadoo la adeegsanayo habka lagu xisaabinayo boqolkiiba ee ugxan-soo-baxa ee dhirta ubaxyada, ayaa lagu qiyaasey in noocyada kala duwan ay yihiin kuwo ku habboon deriska Antonovka, Medunitsa, Ottawa, Grushovka Moskovskaya, Aromat de Vares, iyo Mantet.
Kahortaga iyo ka hortagga cayayaanka iyo cudurrada
Haddii ay dhacdo in la jebiyo sharciyada hoose ee agrotechnology, geedku wuxuu noqonayaa mid xasaasi ah oo ku dhaca weerarada cayayaanka, gaar ahaan, barafka cagaaran, aboorka, iyo sidoo kale cudurada ka soo baxa, xayrta maqaarka iyo kuwa kale.
Si looga hortago, waxaa muhiim ah in la sameeyo dhar qaas ah oo ka mid ah jilifka iyo qodaya qoto dheer ee dogob geed geedka kasta. Sidoo kale, waa inaadan ka tegin caleemo dhacday oo ku taal beerta nadiifka ah. In cayayaanka waxyeello ku dhuumato jiilaalka, ukunta la dhigay qaboobaha.
Haddii geedka tufaaxu uu xun yahay ama uu ka badan yahay, ma bacrimiyo minerals, cudurku wuxuu u muuqan karaa substrate tayo liidata cytosporosistaasi waxay ugu dambeyntii u muuqataa dhibco mugdi ah oo ku yaal jilif. Laantu waxay u dhintaan geed leh cudurka, iyo natiijada, jirridda gebi ahaanba dillaacday. Daaweynta marxaladaha dambe ma'aha mid waxtar leh, waa in isla markiiba ay bilawdo muuqaalka cudurka.
Daaweynta kowaad waxaa lagu sameeyaa xalka daawada "Chom" (40 g halkii 10 l oo biyo ah) guga hore.
Midda labaad waa marka geedo tufaax ah ay u barbaaraan isticmaal isku dar ah 50 g oo ah sulfate copper iyo 10 litir oo biyo ah. Kadib, kadib dhowr asbuuc ka dib, dib ayaa loo nadiifiyaa "Home".
Ma taqaanaa? Kuwa aan doonaynin inay dhirtaan geedaha tufaaxa leh kiimikooyinka, iyaga oo ka baqaya in aysan waqti u helin in ay waxyeello ka hor inta aan la taaban xilliga tufaaxa, khubarada ayaa kugula talinaya ujeedooyin ka hortag ah in lagu buufiyo tufaaxa geedaha miro leh saabuun ama khudradda.
U muuqaalka muuqaalka ah ee fangaska ayaa kiciya horumarka xayrta maqaarkataas oo muujinaysa dhammaan qaybo badan oo geedo tufaax ah oo leh ubaxyo caan ah. Qaar ka mid ah dadka cusubi waxay u arkaan inay yihiin boodh oo ha ku degdegin inay talaabo qaadaan. Xaaladaha noocaas ah, dhibcuhu waxay noqdaan midab madow oo leh saldhig saliida ah, oo si dhakhso ah u duuban. On geedka qaba cudurka ka baxo dayrta iyo ma jiraan ugxan.
Si looga hortago horumarka fangaska, beeralayda khibrad leh ayaa jeermi geedka dhirta oo idil ka hor inta uusan ubaxin burooyinkeeda leh burka sulfat ama leh "Skor" diyaarinta, iyo marka ay ubaxsadaan, ku celceli daaweynta xal milki ah oxychloride. Xilliga dayrta, taajkii ayaa dib loo buufin karaa fitamiin buluug ah.
Maaddadani waxay waxtar u leedahay dagaalka qoloftaasoo keentay hawshii foosha. On "buuxinta White" waxay u muuqataa dhibco caleemo ah caleemaha, ugu dambeyntii diirran, dildilaaca iyo dhibco madow-madow on tufaaxa. Marka caabuqa, waa muhiim inaad nadiifiso geedaha caleemaha waxyeelada leh, laamaha iyo miraha (waxaa lagu gubay beerta). Iyada oo lagu bedelayo sulphate copper, waxaad isticmaali kartaa Topaz guga, ka dib markii ubaxyada caleenta, iyo ka dib ubax aad u jeermis karaa guriga.
Si aan loo keenin geedaha beerta si ay u qaadaan tallaabooyinka dib-u-dhaqaajinta, dayrta kasta, ka saar caleemaha dhacday, kormeeraan qoyaanka iyo quudinta waqtigeeda. Tani waa ka hortagga ugu fiican.
Degganaasho iyo faro badan ee waraabka
Apple White "ku shubida" qoyaanka. Sidaa awgeed, tirada biyuhu waxay u dhigantaa qiyaasta casiirka ee miro. Laakiin waxa ugu muhiimsan - ha ku shub oo xididdada, sababtoo ah xad-dhaaf ah oo biyo ah ayaa ka dhigi doonaa duufaan iyo caaryada xididada. Beerta, geedaha waa la rusheyn karaa, faleebo, dhulka ama dhulka waraabka. Dhamaan qaababkaasi waxay wax ku oolayaan haddii aanay kuleylka ku jirin.
Waxyaabaha ugu muhiimsan - si habboon loo abaabulo meesha tuubada iyo qiyaasta biyaha. Waraabinta waa ka fiicnaan fiidkii, ku shub 2 baaldiyo oo biyo ah oo ka hooseysa geedka sanadlaha ah. Qiimaha ayaa labanlaaban iyadoo ku xiran da'da dhaqanka. Tusaale ahaan, geedaha tufaaxa ee labadii sanno waxay u baahan yihiin 4 baaldiyo oo biyo ah, iwm. Geedaha ah in ka badan shan sano waa la waraabiyaa heerka 50-100 l / sq. m, iyo sidoo kale marxaladaha ay bilaabeen inay midho u dhasho.
Ka dib markii isbeddelka, geedaha tufaaxa ayaa la waraabiyaa markii ugu horeysay ka hor ubbiyada ubax. Geedo waxay u baahan yihiin taxadar gaar ah shanta sano ee ugu horreeya nolosha. Waxaa lagu talinayaa in ay biyo ku jiraan toddobaad kasta. Iyo dhirta tufaaxa qaangaarka ah ayaa dib-u-qoyaan inta lagu jiro xilliga miro.
Eeg cimilada, sababtoo ah kulaylka ayaa ka soo baxaya geedka, iyo cagaarka ayaa bilaabaya inay u qaxaan. Dhowr todobaad ka hor goosashada, u samee waraabinta saddexaad. Si loo ilaaliyo geedkii laga bilaabo xilliga jiilaalka, qoyaanka ciidda ee ugu dambeysa waa la fuliyaa, iyadoo la eegayo xaaladda cimilada diiran, bisha Oktoobar.
Marna ha waraabin geedaha tufaaxa inta lagu jiro Bisaylkiisa miro iyo goosashada ka dib. Wakhtiga dhirta weli ma dhamaan, iyo socodka qoyaanku wuxuu keenaa muuqaalka dhalada iyo caleemaha yar yar, kuwaas oo gabi ahaanba aan ku habbooneyn xilliga jiilaalka. Dhaawac noocaan oo kale ah kadib, geedo la qaboojiyey ma noolaan karaan.
Cagaarka iyo dabacsanaanta ciidda
Baahida Apple waa in la tixgeliyaa biyo kasta. Iyadoo aan loo eegin habka qoyaanka, buuxi habka loo xakameynayo iyo mulching wareegyada pristvolny. Substrate-ka hooseeya wuxuu fududeeyaa aagagga meelaha wax lagu nuugo ee nidaamka xididka. Iyo mulchigu ma oggola in qoyaanka ay uumi baxaan, sidaas darteed looga hortago abuuritaanka diirka qalalan.
Ha u oggolaanin haramaha inay koraan hareeraha godadka, waxay ka nuugaan walxaha waxtar leh ee ciidda, iyaga oo ka hortagaya in ay cunaan dalagyada miraha. Intaa waxaa dheer, cawska ku biirayaa qalajinta ee ciidda beerta. Waqtiga dhirta, ka dibna miraha ku siin doonaa caleemaha cusub.
Ma taqaanaa? Dhirta Apple ma ahan mid daba joog ah. Da'da ugu badan ee "buuxinta cad" - oo ku saabsan 25-30 sano. Iyo nuquladii hore waxay keenaan dhalid yar oo yar.
Waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo bacarimiso dhirta "Filling White" bilowga xilliga daaqsinka, marka caleemaha yar yar ay horumaraan. Guga, geedo baaluq ah ayaa la waraabiyaa xal ammonium ah iyo nitroammofoski ama digada pereprepyu. Maaddooyinka ku jira nitrogen waxay gacan ka geystaan ​​horumarinta degdega ah ee dabeylaha. Haddii aad ka baqaysid kiimikooyinka, waxaad si ammaan ah ugu beddeli kartaa digada digaaga. Xaaladdan, bacriminta waxaa laga diyaariyey 50 qaybood oo biyo ah iyo 1 qayb oo digada. Quudinta ayaa lagu celiyaa 3 jeer dhammaan guga.
Wixii horumarin buuxda, quudiyo geedka dhamaadka March iyada oo isku dar ah HOL ee saamiga 2 tbsp. l 10 litir oo biyo ah.
Ka dib ku celi bacriminta leh isku dar ah superphosphate ka hor ubax. Marka ay burooyinkeeda ottsvetut, quudiyo geedo tufaax leh xal of nitrophoska iyo bacriminta "Sodium HUMATE."
Lagu taliyay 1 dabaq ah. m si ay u sameeyaan qiyaastii 5-7 kg oo dabiici ah, 60 g oo ah superphosphate ama 40 g oo potash ah. Isku darga diyaarsan ayaa la keeney jiritaanka hoostiisa, laakiin wuxuu galay ceelasha diyaarsan ee hore loo diyaariyey. Waxaa lagu beddeli karaa godadka nus-mitir.
Ka dib markii ay hawshu socoto, carrada waa la dajiyay, xakamaynta dhammaan grooves.
Wixii geedaha tufaaxa sii kordhaya carrada acidic, waxay noqon doontaa mid waxtar leh in lagu daro 200 garaam oo lime ah ama nuurad, burka dolomite ama digaag caadiga ah 4 sano oo kasta. Tani waxay gacan ka geysan doontaa dhexdhexaadinta ciidda.
Manjada ugu horeysay ee geedaha tufaaxa cad ee White Filling waxaa la fuliyaa xitaa ka hor inta beerto, si ay u sameeyaan taaj midaysan. Mustaqbalka, guga oo dhan ayaa nadiifiyay cayayaanka jirran, jirdil iyo jirdil. Iyo dayrta waxay ka jajaban yihiin hoos u jilicsan oo aan ku habboon jiilaalka.
Waxaad bilaabi kartaa shaqo bilowga guga, marka dhaqdhaqaaqa casiirku aanu weli bilaabin. Iyada oo la takooro kaneecada, si taxadar leh uga saarto dusha sare ee geedaha yar yar, isagoo ka tegaya 80 cm oo dherer ah, oo gooyaa caleemaha dhinaca. Trick Tricks wuxuu kaa caawinayaa xoojinta xididada.
Ka tirtir waxyaalaha tijaabada ah ee ka soo baxa qaybo la qaboojiyey ama xanuunsan, haddii ay lagama maarmaan noqoto, taajajinta taajka si aan laamaha kale u kala fogaan. Sidoo kale jarjar gooyaa dhulka. Dhamaadka manjooyin, daboolo dhammaan jarista beerta beerta, oo ku duub galka polyetyloogyada meelo ballaaran ilaa geedku dib loo soo celiyo.
Waa muhiim! Si midabkeedu yahay midhaha geedaha yar yar ee aan ku dhicin geedaha tufaaxa ee aan si buuxda loo horumarin, waxaa lagula talinayaa in la gooyo dhammaan inflorescences sanadaha ugu horreeya. Iyo mustaqbalka si loo xakameeyo lambarkooda, sababtoo ah ka dib markii xoog culus, dhirta tufaaxu waxay bilaabaan inay midho dhaadheecaan. Intaa waxaa dheer, tani waxay ka muuqataa dhadhan.
Geedaha yar yar waxay u baahan yihiin dareen gaar ah. The geedo ee sanadka labaad ee nolosha foomka a taaj. Si nidaamkan si sax ah u dhaco, guga waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo laanta lakabka ah iyo laamaha koraya. Kobaca sannadkii hore ayaa la jaraa saddex meelood meel.
Ka dib markii manjooyin habboon, taajkii geedka tufaaxa ayaa kori doona, ma kor. Waxay si cad u muujineysaa 2-3 xitaa xitaa heerarka hoose, kuwaas oo ka badan kuwa ka sareeya. Beerta qaarkeed waxay soo jeedisaa walxaha culus in la xiro si loo yareeyo caleemaha qalfoofka sanadaha ugu horreeya ee noloshooda si ay u helaan qaabka kicinta. Waxaa jira fikrad ah in tirada iyo tayada dalagga ay ku xidhan tahay. Lafaatiirta aadka loo xirxiray miisaanka midhaha, waxay ka fiicnaaneysaa in la soo celiyo, oo la geliyo suufka yar yar ee hoose ee taageerada.
Apple Belyaha Barkadda jiilaalka waxaa badanaa soo weerara jiirka, si xun u dhaawaca cayayaanka. Si loo ilaaliyo geedaha mugdiga yar ee weerarada kuwan, bannaanka ayaa ku duuduubaya laba lugood oo dhulka hoostiisa ah. Haddii kale, mesh ama mesh cufan, taas oo lagu taageerayo irbadaha geedi-socodka, waxay samayn doonaan. Waa suurtogal in la beddelo alaabooyinkaas dareere ah oo laga diyaariyey subag iyo walxo kale oo aan ku habboonayn gabaadaha.
Gaar ahaan waa la ilaaliyaa waa geedo yar yar - oo leh jilif waxyeello leh, waxay u egtahay in aanay ka badbaadi karin jiilaalka. Iyo si loo ilaaliyo xididada laga bilaabo dhaxan, ilaa shan sano jir ah ee mulch jiilka ku dhow dogob-geedka kula digada. Xilliyada aan barafka lahayn waa muhiim in la gooyo guntimaha noocaas oo kale ah heerka 15-20 cm.
Beerista iyo kaydinta
Dhibaatada isku midka ah ee miraha oo dhan oo ku yaalla White Filling Tree ayaa laga yaabaa inay tahay midka kaliya "macdan" oo kala duwan. Tufaaxa bisil waxay leeyihiin dhadhan aad u fiican waxayna ku habboon yihiin isticmaalka qaabka cayriinka. Laakiin hadhuudh wanaagsan, waxay u baahan yihiin wax qabad deg-deg ah, maadaama ay ka lumeen tayada ilaalinta. Gaar ahaan haddii ay bannaanka udiiban biyo dhirta inta lagu guda jiro beergooyska. Sidaa darteed, tufaaxa tufaaxa iyo gebi ahaanba aan ku habboonayn gaadiidka. Xitaa, xitaa dhibta ugu yar iyo abrasions waxay u jeedaan baro cawlan. Si looga fogaado tan, waxaa lagu talinayaa in "White pouring" si taxadar leh looga saaro geedaha. Tufaaxyada noocaan ah ee guriga ayaa diyaariya saxarado aad u dhadhan fiican leh, macmacaan, marmalade iyo macmacaan kale oo guriga lagu sameeyo xilliga jiilaalka.
Sida loo doorto miraha dabocase? Dib u eegida noocyada ugu wanaagsan ee lagu beerayo guriga, aqalka dhirta lagu koriyo iyo berrinka bannaan
Dhammaan wax ku saabsan digaagga shiilanka Shiinaha
Dhibcooyinka dhegdhegga ah ee aan dhicin ee caleemaha orchid. Maxay tahay oo ay tahay qiimo leh in lagu dhawaaqo digniinta?
Faras carab ah
Isbeddelka caanaha Dukhmyanaya: dabeecadaha
Beerista guul leh ee yaanyada ee beerta waxay ku xiran tahay inta badan noocyada kala duwan ee loo dooran doono beerto. Qof kastaa wuxuu rabaa in uu helo miro sare oo tayo sare leh si abaalmarin loogu helo shaqadooda. Sidaa darteed, macluumaad hordhac ah oo ku saabsan sifooyinka, shuruudaha agrotechnical, faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka kala duwan ee noocyo gaar ah waa mid aad muhiim u ah. Read More
Goobta gaarka loo leeyahay ee Guayava: sawirrada guriga, daryeelka guriga
Guryaha waxtarka leh iyo codsiga wadaad madow
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Geed geedeedka 2019